တရားရုံးစာရေးကယောဘဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ - JobDescriptionSample.org
ငွေရှင်းကောင်တာတွင်အလုပ်တာဝန်နှင့်တာ ၀ န်ယူမှု
ဒင်ျငါးငှေ, တော့အရောင်း, နှင့်အပန်းဖြေစက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Repair ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
လေယာဉ် Launch ပြီးတော့ Recovery ကိုအထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကနည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ Functions များ
Sales Agents များထံတွင်, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ Functions များ
စားဖိုမှူးပြီးတော့ဌာနမှူး Cook ကယောဘဖျေါပွခကျြ / ခံမှု Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ပြောင်းလဲခြင်းလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် Booth ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြဂိမ်းကစားခြင်း / Functions များနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
သားဖွားမီးယပ်အထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ဘိလပ်မြေ Mason ပြီးတော့ကွန်ကရစ် Finish ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty Template ကို
Radiologic နည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty နမူနာ
နေအိမ် / Uncategorized / တရားရုံးစာရေးကယောဘဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
တရားရုံးစာရေးကယောဘဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 1,159 views
တန်းကျောင်းသူလေးပြီးတော့ Sorters, စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty နမူနာ
ဇွန်လ 28, 2016
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Transcriptionists ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
ဖိနပ်နှင့်သားရေအလုပ်သမားများပြင်ဆင်ခြင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှုနမူနာ
စည်းမျဉ်း၏တရားရုံးတွင်ဓမ္မဆရာတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်; ချေါခံရဖို့ဖြစ်ပွားမှုတရားသူကြီးတွေရသေးများအတွက်အန္တရာယ်-အခမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပါစေ; နှင့်မျက်မြင်သက်သေများ, ရှေ့နေများတရားခွင်၌.
သာဓကများစာရင်းစာရွက်ဟုခေါ်တွင်စေရန်ပြင်ဆင်, desktops တွေနဲ့သို့မဟုတ်စာစီလုပ်ငန်းတွေလျှောက်ထား.
စာရွက်စာတမ်းမြင်ကွင်းသဘောထားတွေ, တရားသူကြီးဝယ်ယူမှု, တရားရုံးကုန်ကျစရိတ်၏အခကြေးငွေဖန်တီးသို့မဟုတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ.
စမ်းသပ်မှုချိန်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အများပြည်သူထံမှဖြေရှင်းချက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်, တရားရုံးကြားနာ, လုပ်ငန်းစဉ်များ, အကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ပြီးရမ်း, ဆင့်ခေါ်, ဆင့်ခေါ်စာကုန်ကျစရိတ်, သို့မဟုတ်အခကြေးငွေပြစ်ဒဏ်များ၏.
တရားရုံး၏အမိန့် Make နှင့်အရေး, ထိုကဲ့သို့သောစမ်းအမိန့်အဖြစ်, ပစ်လွှတ်စာရွက်စာတမ်းများ, အချက်အလက်များဒဏျ.
ရှာရန်အဆက်အသွယ်မျက်မြင်သက်သေများ, ရှေ့နေများ, သို့မဟုတ်တရားတရားသူကြီးများအတွက်အချက်အလက်များနှင့်ဖိုင်များရှိသည်.
ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းကိုလေ့လာလိုက်နာမှုနှင့် ပတ်သက်. တရားရုံးများမှကုသသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါ posted.
အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကို execute, addressing ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပါအဝင်, တရားရုံးစာတမ်းများဖြည့်စွက်, သို့မဟုတ်ရုံးပစ္စည်းများသို့မဟုတ် devices တွေကိုစောင့်ရှောက်.
ပြ protected သို့မဟုတ်တရားရုံးမှဖြစ်စဉ်များကိုလိုက်နာပါ, ပိုက်ဆံအပါအဝင်, ဆေးဝါးများ, သို့မဟုတ် tools များ.
ဘယ်အချိန်မှာလိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုအပေါ်စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု. အပေါ်စွဲချက်တင်မြှင့်တင်ရန်.
အဆိုပါတရားခွင်၌ဆီသို့ဦးတည်ဆက်နွယ်နေဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်စွဲချက်ဖတ်ရန်နှင့်, မရှိမဖြစ်လိုလျှင်, သမိုင်းစွပ်စွဲ’ တောင်းပန်ခြင်း.
သက်ဆိုင်တရားခွင်၌ Make နှင့်အထိမ်းအမှတ်ပြသို့မဟုတ်အထောက်အထား.
စံချိန်တရားသူကြီးတရားစွဲဆိုမှု, တရားခွင်၌တရားစွဲဆိုမှု၏စာရွက်စာတမ်းအချိန်လေးအလုပ်သမား, သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ဂီယာ, တိုတောင်းသော-လက်သို့မဟုတ် stenotype ထုတ်ကုန်သုံးပြီး.
ခဲတံနှင့်အတူတရားရုံးပြင်ဆင်ပါ, အစီရင်ခံစာ, ရေ, မှတ်တမ်းတင် devices များအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြောင်းသေချာ easels နှင့်အောင်.
မျက်နှာပြင် Start, ဖျောတရားသူကြီးတွေ, သူတို့ကို toorder တောင်းဆို.
လြှို့ဝှကျစကားအရာရှိများနှင့်စကားပြော, ရှေ့နေတွေ, တရားသူကြီးတွေ, အာဏာပိုင်များ, သို့မဟုတ်လူမှုရေးဗျူရိုအရာရှိများကတရားရုံး၏အင်္ဂါရပ်များတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှ.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားသူတွေစုစုပေါင်းအာရုံကိုထောက်ပံ့ဘယ်သို့ပြောသည်ကို,, လုပ်ခံရအချက်တွေကိုနားမလည်ဖို့အချိန်လေးလည်း, စံပြအဖြစ်တောင်းခံကိစ္စများ, နှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ရပ်မှာ mesmerizing ဘယ်တော့မှ.
တစ်ဦးချင်းစီအလားအလာများနှင့်မကြာသေးမီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. လတ်ဆတ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အရေးပါမှုကို active-သင်ယူ-သိမှတ်ကြလော့နှင့်.
သင်ယူခြင်းသို့ချဉ်း ကပ်. -ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် educationPERinstructional နည်းစနစ်များနှင့်ကုသလျှောက်ထားပိုင်ခွင့်တိကျသောအခွအေနေသင်ကြားမှုအတွက်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့အချက်များကျွမ်းကျင်လာသောအခါ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-OverseeingANDAssessing ထိရောက်မှု, မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှေးရှေး, သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကုစားခြေလှမ်းများကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးရန်.
လူမှုအခြားသူများကိုမသိမဟုတ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းကို-ဖြစ်ခြင်း’ တုံ့ပြန်မှုနှင့် comprehension သူတို့လုပ်ပေးနေချိန်မှာသူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့်.
ရှေးရှေးကူညီပံ့ပိုးရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေ Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-ကွိုးစား.
အဆင့်မြင့်အနုစိတ်ပြဿနာများ Problemsolving-ကိုစူးစမ်းနဲ့ options လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုများကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်လေ့လာပြီးမှ related ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သုံးသပ်.
နည်းပညာသုံးစွဲသူနဲ့ align လုပ်ဖို့ထုတ်ကုန်ကူညီပေးဖို့ဒီဇိုင်း-အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများကို.
Tools များရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်းတဲ့အလုပျ execute ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများအမျိုးအစား.
အရစ်ကျ-ထည့်သွင်းခြင်းထုတ်ကုန်, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုးများ, features တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
မြောက်မြားစွာရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. programming-ထုတ်လုပ်ကွန်ပျူတာ packages များ.
function ခြေရာကောက်-ကိုကြည့်ရှုခြင်းကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်း, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစက်သင့်လျော်စွာအလုပ်လုပ်သေချာဖြစ်.
ကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျး tools များအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အခါထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလိုအပ်သောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်.
ပြဿနာများကို running နှင့်ဤအကြောင်းကိုသွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်ရွေးချယ်ရာတွင်နောက်ကွယ်မှ troubleshooting-ဖော်ထုတ်ခြင်းအချက်များ.
ပြုပြင်တာတွေ-Restoring မရှိမဖြစ်သောတူရိယာအသုံးချဖို့နည်းလမ်းများသို့မဟုတ် devices များ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးသုတေသန-ကွပ်မျက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များစစ်ဆေးခြင်းများ, န်ဆောင်မှုများ, အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်သို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
analysis-ကိုစူးစမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏မျိုးအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုများနှင့်ဝေဒနာတွေအတွက်ဘယ်လောက်တိုးတက်မှု, လုပျထုံးလုပျနညျး, နှင့်လေထုသက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဦးမည်.
စက်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အပြုအမူများ၏ပန်းတိုင်ဆွေမျိုးလည်းနည်းလမ်းများအားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းနည်းလမ်းများသို့မဟုတ် system ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏အချက်ပြခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ခဲ့.
ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ-ရယူခြင်းနှင့် tool များ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုဆီသို့ဦးတည်ကြည့်ရှု၏စစ်ဆင်ရေး, သာယာအဆင်ပြေမှုများ, နှင့်ထုတ်ကုန်မရွေးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်း၏ကြီးကြပ်မှုအရင်းအမြစ်-ရည်ရွယ်ချက်တစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ကို, နှင့်အလုပ်တွန်းအားပေး, ကြောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကွဲပြားခြားနားသွား.
အကြီးတန်းကျောင်းဘွဲ့ (GED သို့မဟုတ် High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
Connect ကိုရဲ့အဆင့် (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် 2-တစ်နှစ်ဇာတ်စင်)
အောင်မြင်ခြင်း / စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန – 81.77%
ဆုံးဖြတ်ချက် – 85.64%
စီမံကိန်း – 86.08%
ခေါင်းဆောင်မှု – 84.91%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 92.58%
အခြားသူများအဘို့ကိစ္စ – 84.21%
ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 85.68%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.62%
ဖိအား Threshold – 89.47%
VersatilityANDFreedom – 91.24%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 91.40%
ရှုထောင့်များ၏အသိအမြင် – 95.16%
ရိုးသားခြင်း – 91.58%
လွတ်လပ်ရေး – 88.37%
သစ်လွင်မှု – 89.93%
စဉ်းစား – 88.24%
နောက်တစ်ခု ငွေရှင်းကောင်တာတွင်အလုပ်တာဝန်နှင့်တာ ၀ န်ယူမှု
မော်ဒယ်စန္ဒရားပြုလုပ်သူများသည်, သစ်သားယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
ပစ္စည်းတိကျမော်ဒယ်များ Full-size ကိုအကွာအဝေးနှင့်သစ်သားစည်းဝေး. အခနျးန်ထမ်းများနှင့်သစ်သားမြှူပါဝင်သည် …
Pingback: 10 Issues I Hate About Internet Marketers - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Nasj, BoomBoom)
© Copyright 2020, မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး